မိုးကောင်းကင် - Network
=> Window Vista
=> Proxy Server
=> မြန်မာ E-books
=> Access Kit လုပ်နည်း
=> Folder Option
Network ပိုင်း အနေနဲ့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကိုသူရိန်ရေး ထား တဲ့ Wi-Fi နဲ့ Wi-Max ကွာ ခြား ချက်လေး တွေနဲ့ တခြား အကြောင်း လေးတွေ ကို ဖော်ပြ ပေး မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Wi-Fi နဲ့ Wi-Max ကွာခြား ချက်လေး ပါ။
Wi-Fi က 802.11b standard ကိုပြောတာပါ။ frequency range က 2.4 GHz ရှိပါတယ်။ သီအိုရီအရ Speed က 11 Mbps ရှိပေမဲ့ လက်တွေ့မှာတော့5 Mbps လောက်ပဲ ရပါတယ်။ မီတာ 100 အကွာအဝေး ပေနဲ့ပြောရရင် 330 ပေအတွင်းမှာပဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Transport Protocol ကEthernet ကို သုံးပါတယ်။
Wi-Max က 802.16 Standard နဲ့ 802.16a Standard ကိုပြောတာပါ။ 802.16 က 10 GHz ကနေ 66 GHz ထိ frequency range ရှိပါတယ်။802.16a ကတော့ 2GHz ကနေ 11GHz ထိရှိပါတယ်။ Speed အနေနဲ့ 802.16 ဟာ channel တစ်ခုအတွက် 124 Mbps အများဆုံးရပါတယ်။802.16a ကတော့ 20 MHz ရှိတဲ့ Channel မှာ 70 Mbps ရပါတယ်။ အကွာအဝေးမှာတော့ တစ်မိုင်ထက်ကျော်လွန်ပြီး သုံးလို့ရပါတယ်။ TransportProtocol ကတော့ TCP ကိုသုံးပါတယ်။
Admin Shares ပိတ်ချင်ရင်
ကွန်ပျုတာမှာရှိတဲ့ drive တွေ ( C$, D$,etc) အစရှိတဲ့ Drive တွေကို Windows XP ဖျောက်ထားကြတယ်။ အဆို ပါဖျောက်ထားတဲ့ Drives တွေကို Windows XP Installation လုပ်စဉ်က တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ Admistrative Privileges ( Admin ကခွင့်ပြုထားတဲ့ User Account) တွေက ၀င်ရောက်သုံးစွဲခွင့်ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့များ Admin Share ကို Disable လုပ်ထားချင်တယ်ဆိုရင် -
1. Start --- Run--- Type Regedit ရိုက်ပါ။
2. HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServiceslanmanserverparameters ကို ရောက်အောင်သွားပါ။
3. ညာဘက်လွတ်နေသော Space တွင် right click နှိပ် New --- DWORD Value ကိုရွေးပါ။
4. AutoShareWks ရိုက်ပြီး တန်ဖိုးကို zero ရိုက်ပါ။
5. စက်ကို restart လုပ်ပါ။
အရင်ကတည်းက Network ဆင်တိုင်း ကွန်ပျူတာတွေရဲ့ IP မှာ network ID ကို Class C ဖြစ်တဲ့ 192.168.0 ကိုပဲ အမြဲပေးမိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့် အဲဒီ net ID ပဲ ပေးမိမှန်းမသိဘူး။ နောင်တော်ကြီးတွေဆီကပဲ အတုခိုးမိတာလား။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း မသိတော့ဘူး။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကလည်း မေးဖူးတယ်။ ဘာကြောင့် LAN တွေရဲ့ Net ID ကို 192.168.0 ပဲ သုံးတာလဲတဲ့။ ကျွန်တော်လည်း ဘာရမလဲ။ မှတ်ရတာ လွယ်လို့နေမှာပေါ့ကွာလို့ ဖြေမိတယ်။ အခု MCSE XP SP2 စာအုပ်ဖတ်တော့မှ တက်တက်စင်အောင် လွဲမှန်းသိတော့တယ်။ အဲဒီထဲမှာ ရေးထားတာက
IP တွေသုံးစွဲခွင့်ကို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကြီး ရှိတယ်။ အင်တာနက်နဲ့ ချိတ်မဲ့ကွန်ပျူတာတိုင်းဟာ IP ရှိရတယ်။ အဲဒီ IP ကို ကိုယ်ပေးချင်တာ ရမ်းပေးလို့မရဘူး။ IANA (Internet Assigned Numbers Authority) ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ဆီမှာ မှတ်ပုံတင်ရမယ်။ ဒါပေမဲ့ အင်တာနက်နဲ့ ဆက်သွယ်မှုမရှိတဲ့ Network (ဒါမှမဟုတ်) Private Network တွေအတွက်တော့ မှတ်ပုံတင်စရာမလိုဘဲ လွတ်လပ်စွာအသုံးပြု ခွင့်ပြုပေးထားတဲ့ IP တွေရှိပါတယ်။
Class A ဆိုရင် 10.0.0.0 ကနေ 10.255.255.255
Class B ဆိုရင် 172.16.0.0 ကနေ 172.31.255.255
Class C ဆိုရင် 192.168.0.0 ကနေ 192.168.255.255 ထိ ပေးခွင့်ရှိတယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။ အခုဖော်ပြထားတဲ့ Address range တွေကို ဘယ် Internet Host ကမှ သုံးစွဲထားခြင်းမရှိဘူးလို့လည်း ရေးထားပါသေးတယ်။
Network မှတဆင့် တခြား ကွန်ပျူတာများ ကိုထိန်းချုပ်မယ်
ကိုယ့် Network အတွင်းမှာရှိတဲ့ တခြားကွန်ပျူတာတွေကို
ထိန်းချုပ်တဲ့နည်းတွေ မြောက်မြားစွာ ရှိပါတယ်။
တခြားကွန်ပျူတာဘာလုပ်နေတာကအစ ထိုင်ကြည့်လို့ရတဲ့ Program တွေလည်း
မြောက်မြားစွာရှိပါတယ်။ Local Chat (Text, Voice) ၊ Local Mail၊ Local
Intranet စတာတွေလည်း ဖန်တီးလို့ ရပါသေးတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ
အခုတော့ တခြားကွန်ပျူတာတွေမှာ သုံးနေတဲ့ Program တွေကို
လှမ်းပိတ်တဲ့နည်းလေး တင်လိုက်ပါတယ်။ တစ်ခုလောက်တောင်းဆိုချင်တာက
ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးချပြီး သူတစ်ပါးကို အနှောင့်အယှက်မပေးပါနဲ့။
၁။ ပထမဆုံး Command Prompt ထဲ ၀င်လိုက်ပါ။
၂။ တခြားကွန်ပျူတာမှာ run နေတဲ့ Program list ကို ကြည့်နိုင်ဖို့
tasklist command ကို သုံးရပါ့မယ်။ Parameter တွေ ခံရပါမယ်။ tasklist /s
computername လို့ ရိုက်ပါ။ computername နေရာမှာ ကိုယ်ဆက်သွယ်မယ့်
ကွန်ပျူတာရဲ့ name ကို ထည့်ရပါမယ်။
၃။ ဒါဆိုရင် အဲဒီ ကွန်ပျူတာမှာ run နေတဲ့ program list တွေ ပေါ်လာပါပြီ။
၄။ လှမ်းပိတ်နိုင်ဖို့အတွက် taskkill command ကို ထပ်သုံးရပါ့မယ်။
၆။ programname နေရာမှာ ပိတ်ချင်တဲ့ program name ကို ရိုက်ရပါမယ်။ ဥပမာ
ခဏလောက် စောင့်ကြည့်ပါ။ ပြီးရင် အဲဒီကွန်ပျူတာ ကိုင်တဲ့သူ ငါ့ကွန်ပျူတာ
ဘာဖြစ်သွားတာပါလိမ့်ဆိုတဲ့ မျက်နှာကြီးကို စပ်ဖြီးဖြီးနဲ့
Protocol များ အကြောင်း
ဒါလည်း ကိုသူရိန်ရေးထား တဲ့ protocol လေး တွေ ရဲ့ အကြောင်းလေး ပါ။
website လိပ်စာတစ်ခုကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဥပမာ - http://www.google.com အဲဒီလိပ်စာမှာ ရှေ့က http ဆိုတာက hyper text rtansfer protocol ရဲ့ အတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ် ။ protocol ဆိုတာကaset of rules and formats လို့ပြောကြပါတယ် ။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုစုစည်းထားခြင်း လို့ပြောနိုင်ပါတယ် ။ ဘယ်လိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေလည်းဆိုရင်တော့ data အပို့အယူ လုပ်တဲ့အခါမှာ လိုက်နာရမယ့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ပြောတာပါ ။
protocol ပေါင်းမြောက်မြားစွာရှိပါတယ် ။ အင်တာနက် website တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသုံးရတဲ့ protocol က http ပါ။ hyper text transfer protocol ဆိုတော့ hyper text များပြောင်းရွေ့သယ်ယူရာတွင် သုံးရသော protocol ပေါ့။ hyper text ဆိုတာက ရိုးရိုး text တွေမဟုတ်ဘဲ link ပါတဲ့စာသားတွေကို hyper text လို့ခေါ်ပါတယ် ။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း webpage တိုင်း webpage တိုင်းမှာ link ပါတဲ့ text တွေရှိတာပဲမဟုတ်လား။
http ပြီးတော့ အခုနောက်ပိုင်း အသုံးများလာတဲ့ protocol ကတော့ https ပါ။ https ရဲ့အရှည်က hyper text transfer protocol over secure socket layer (ssl) ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ssl ပါတဲ့ http ပါ ။ ssl က ဘာလုပ်ပေးနိုင်သလဲဆိုတော့ encryption/decryption လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ encrypt လုပ်တယ်ဆိုတာက မြန်မာလိုပြောရင် ၀ှက်စာလုပ်တာပေါ့ ။ ဥပမာ ကွန်ပျုတာ A ကနေ ကွန်ပျုတာ B ဆီကို abc ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုပို့မယ်ဆိုပါစို့။ ဒီအတိုင်းရိုးရိုးတန်းတန်းပို့မယ်ဆိုရင် ကွန်ပျုတာ A ကနေ ကွန်ပျုတာ B ဆီကို မရောက်ခင်ကြားမှာ တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်က ခိုးယူလို့ရပါတယ်။ encrypt လုပ်ပြီးပို့မယ်ဆိုရင် ခိုးယူ၍ရခဲ့ရင်တောင်မှ ဖက်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ abc လို့တိုက်ရိုက်မပို့ပဲ abc ဆိုတဲ့စာလုံးသုံးလုံးကြားမှာ 123 ထည့်ပြီး ပို့မယ်၊ ဒါဆိုရင်a1b2c3ဖြစ်သွားပြီ။ ပြီးတော့မှ ကွန်ပျုတာ B ကို မင်းငါပို့တဲ့ data ရတဲ့အခါမှာ 123 ကိုဖယ်ပြီးမှ လက်ခံလို့ပြောထားလိုက်မယ်။ ကြားကနေဖောက်တဲ့သူကတော့ a1b2c3 ဆိုတာကို နားလည်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒါက ဥပမာ အနေနဲ့ပြောတာပါ ။ တကယ်တမ်း encrypt လုပ်နည်းများစွာရှိပြီး အဲဒီ encrypt ကိုပြန်လည်ဖြည်ခြင်း decrypt လုပ်ဖို့ရာ အတော်ခက်ခဲပါတယ်။
့https protocol ကို login လုပ်ရတဲ့ website တွေမှာ အသုံးများပါတယ်။ user တွေ ရိုက်ထည့်တဲ့ login name နဲ့ password တွေ လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Gmail ဟာ https ကိုသုံးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ username နဲ့ password ကို ကြားကနေ ခိုးယူလို့မရနိုင်ပါဘူး။
နောက် Internet မှာ အသုံးများတဲ့ protocol ကတော့ ftp ပါပဲ။ file transfer protocol ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်တွေ ရွေ့ပြောင်းလို့ရအောင် အထူးတလည် တီထွင်ထားတဲ့ protocol ပါ။ website တိုင်းကို ftp နဲ့ access လုပ်လို့ရပါတယ်။ ftp://www.google.com ပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ftp ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ authorized person မှကြည့်လို့ရပါလိမ့်မယ်။ free ဖွင့်ပေးထားတဲ့ ftp site တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ftp နဲ့ site တွေကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ စာတွေပုံတွေကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘဲ PC မှာ My Computer ကိုဖွင့်လိုက်သလိုမျိုး file တွေ folder တွေကိုပဲမြင်ရမှာပါ။
NLB service ဟာ Web Server, Firewall Server, Proxy Server စသည်တွေမှာသုံးတဲ့ Internet Server Application တွေကို အချိန်တိုင်းခေါ်ယူသုံးစွဲနိုင်အောင် (server down သည့်အချိန်နည်းပါးအောင်) နဲ့ cluster (server များကို အုပ်စုဖွဲ့ထားခြင်း) တစ်ခုဟာ performance နှေးနေပါက နောက်ထပ် system များ အလွယ်တကူ ထပ်တိုးနိုင်အောင် စသည်တို့ကို ပိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ Windows Server တင်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးဟာ စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်းမှာရော၊ စိတ်ချရမှုမှာပါ အကန့်အသတ်တွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Windows Server တင်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာနှစ်လုံး၊ သုံးလုံးလောက်ကို cluster တစ်ခုအနေနဲ့ ပေါင်းစည်းလိုက်မယ်ဆိုရင် NLB ဟာ အဲဒီ server တွေ အချင်းချင်းအတွက် performance တွေ reliability တွေကို ညီအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ Web Server၊ FTP Server၊ Telnet Server သုံးလုံးကိုစုထားတဲ့ cluster တစ်ခုမှာဆိုရင် NLB ဟာ ၀င်လာတဲ့ client request မှန်သမျှကို အဲဒီ cluster အတွင်းမှာရှိတဲ့ host (Network အတွင်းရှိသော IP ပါသည့် device မှန်သမျှ) တွေအကုန်လုံးဆီ ဖြန့်ဝေပေးပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း NLB ကိုသုံးပြီး traffic တွေမှန်သမျှကို host တစ်ခုတည်းဆီသွားအောင်လည်း လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။
ပြီးတော့ NLB ဟာ cluster အတွင်းမှာရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေအကုန်လုံးကို cluster IP address သုံးပြီး address တပ်လို့ရပါသေးတယ်။ (မူရင်း IP ကို မထိခိုက်စေပါဘူး)
ကိုယ့် Network မှာ NLB ကိုလည်း သုံးထားမယ်၊ run နေတာကလည်း Load-Balanced application ဖြစ်မယ်ဆိုရင် အဲဒီ application တင်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာ down သွားတောင်မှ NLB က တခြား အလုပ်လုပ်နေသေးတဲ့ ကွန်ပျူတာဆီကို အဲဒီကွန်ပျူတာဆီရောက်လာတဲ့ load တွေကို လွှဲပေးမှာပါ။ မူလကွန်ပျူတာ ပြန်ကောင်းသွားရင်တော့ load တွေကို share ပြန်ယူလို့ရပါတယ်။
ဒီအကြောင်းလေး တွေကိုအပြည့်အစုံ ဖတ်ချင်ရင်တော့ ကိုသူရိန်တို့ရဲ့ IT Men ကိုသွားဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။